Bartamihii 2020 shirkii maaraynta ayaa lagu guuleystay
Markay ahayd Luulyo 25, Shirkii Maareynta Mareyn ee 2020 ee Grand Kheyrka Koowaad, LTD oo ay ku qoran tahay "Mawduuca ku-wajahan warshadaha, curinta iyo ganacsi-abuurka" ayaa lagu qabtay Langham Place, Dhaqanka dhaqanka ee Ningbo.
Waa maxay sababta ay u muuqato ifafaale furid markii la isticmaalayo makiinad kulul dhalaalaysa si loo xiro sanduuqa?
Mashiinnada wax lagu dhejiyo kuleylka dhaldhalaalaya waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha baakadaha, oo ay ku jiraan mashiinka sanduuqa shaandhada kulul ee dhalaalaya, mashiinnada sanduuqa xajiinta kulul ee dhalaalaya, iwm.,…
Waxyaabaha loo adeegsado waxyaabaha lagu dhejiyo dhejisyada waxaa loo kala qaybin karaa nooca emulsion, nooca dareeraha biyaha, nooca dareeraha, iyo nooca dhalaalaya kulul.
Waxyaabaha cayriin ee dhadhanka kulul ee xafaayadda dhareerka ah!
Summadaha kulul ee dhalaalaya ayaa si balaadhan loogu isticmaalaa alaabada nadaafadda waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan guud ahaan qaab dhismeedka iyo shaqada alaabooyinka fayadhowrka.
Sida loo sameeyo ulaha dhaldhalaalka dhalaalaya oo si adag u dhaji
Usha xabagta leh waa shey la soo saaray sannadihii ugu dambeeyay. Waxay u isticmaashaa kuleyliyaha korantada si ay u dhalaasho koollada. Koollada ayaa laga dheehan karaa xuubka si ay u hoggaansanaanta u hoggaansanaanta. Way fududahay in la shaqeeyo oo leh xawaare daaweyn dhakhso leh.
Biyo xareynta ah ee SSBR
Sharaxaadda xajiyeynta caagga ah ee caagga ka sameysan ayaa ah ka samaysan caag isku-dhafan ama caag dabiici ah oo aasaaska u ah.